DIDIM-PITSARANA : Voaheloka 5 taona an-tranomaizina ilay tovolahy nandoro Tribonaly
Raha tsiahivina ny tranga niseho tamin’ny talata 5 septambra 2017 tamin’ny 9 ora maraina dia tovolahy iray antsoina hoe Razafinantenaina Niola, 23 taona avy any Mandritsara mpianatry ny Oniversiten’i Toamasina sampam-pianarana lalàna no nampiteny ny anarany tao amin’ny lapan’ny Fitsarana ambony Toamasina. 20 novembre 2017
Nodorany ny sezan’ny mpitsara sy ny sainam-pirenena tao anatin’ny efitranom-pitsarana iray tao amin’ny lapan’ny Fitsarana ambony Toamasina. Fihetsika izay nataony vokatry ny tsy fahafaliany tamin’ny fihemoran’ny fitsarana ny namany iray. Ilay namany izay voalaza fa voarohirohy tamina raharaha halatra. Taorian’ny fihetsika nataony, dia voasambotra avy hatrany ny tenany.
Ny teo anivon’ny polisy misahana ny ady heloka bevava tao Toamasina no nisahana ny fanadihadiana. Ny alakamisy 7 septambra no niakatra Fampanoavana ka naiditra am-ponja vonjimaika ny androtr’io ihany. Voalaza tamin’izany fotoana izany fa ny alakamisy 19 oktobra ny fitsarana azy. Vokatry ny fitokonana nataon’ny sendikan’ny mpitsara anefa dia tsy tontosa izany ka voatery nitohy ny fitazomana vonjimaika azy tao amin’ny fonjan’Ambalatavoahangy. Roa volana mahery kely aty aoriana vao tanteraka ny fitsarana.
Ny alakamisy 16 novambra lasa teo no niakatra fitsarana ny raharaha. Ny lehiben’ny mpirakidraharahan’ny Fitsarana ambony no mpitory. Fandoroana efitranom-pitsarana ambony, fanimbazimbana mpitsara ary fandoroana ny sainam-pirenena malagasy, ireo no vesatra nanenjehan’ny fitsarana azy.Naharitra ora iray teo ho eo ny fifandaharana teo amin’ny mpitsara sy i Razafinantenaina Niola. Ity farany izay nifona nangataka famelana teo anatrehan’ny fitsarana ary nilaza fa « tsy tompon’ny tenany tamin’ireny fotoana ireny ka lasa nanao fihetsika tsy am-piheverana ». Na dia teo aza izany fifonana izany, dia nilatsaka ny didim-pitsarana. Voasazy 5 taona an-tranomaizina Razafinantenaina Niola, sazy mihatra avy hatrany.
Hiara-dia sy hampandany ny kandidà Andry Rajoelina n°13 DEPIOTE HARIJAONA RANDRIARIAMALALA (185) 11 octobre 2018 Napetaka tao amin’ny toeran’ny kandida faha-13 ny afisin’ny faha-14 FANAHINIANA SA TSY FAHAMATORANA ? (185) 11 octobre 2018 Votsotra ny menoty rehetra natao taminy BEBETO JIOLAHY RAINDAHINY AO TOAMASINA (175) 13 octobre 2018 Nandresy lahatra ny mponin’Itasy FILOHAN’NY ANTOKO MMM – FREEDOM - MAITSO (117) 15 octobre 2018 Nisy nikasa hanakantsakana ny fandalovan’ny kandidà Andry Rajoelina NOSY BE (113) 15 octobre 2018 Lehilahy miisa 3 no voasambotry ny zandary VONO OLONA FENO HABIBIANA TENY TANJOMBATO (112) 13 octobre 2018